Julie's Everytime Assorted Biscuits (530g) ~ ICT.com.mm
HomeJulie's Everytime Assorted Biscuits (530g)
Julie's Everytime Assorted Biscuits (530g)
Contains cereals containing gluten, milk derivatives, soya derivatives and egg. Processed inafacility that also processes peanut, sesame, tree nuts and nut products. အချိုဓာတ်အရမ်းမကဲတဲ့ Semi Sweet ဘီစကစ်၊ ဝေဖာချောင်းနဲ့ Sandwiched ဘီစကစ်အမျိုးအစားတွေကို အထူး... [Learn more]
အချိုဓာတ်အရမ်းမကဲတဲ့ Semi Sweet ဘီစကစ်၊ ဝေဖာချောင်းနဲ့ Sandwiched ဘီစကစ်အမျိုးအစားတွေကို အထူး “ပရီမီယမ်” ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ Julie’s အမှတ်တံဆိပ် Everytime Assorted Biscuits မုန့်ပုံး (530 ဂရမ်) ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေအဖြစ် ကစီဓာတ်ကြွယ်ဝသည့်ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ မြေပဲ၊ ဥနှင့် ပဲအခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားပါတယ်။